Aggregate Statistics Inogona Kukufambisa Zvakashata | Martech Zone
Aggregate Statistics Inogona Kukufambisa Zvakashata
Mugovera, December 8, 2012 Mugovera, December 8, 2012 Douglas Karr
Pave nemakore angangoita makumi maviri kubvira pandakatanga mubhizinesi rezvenhau. Ndiri kuonga mikana iyo yakandiisa pamberi pekushambadzira matekinoroji kumashure ipapo. Iniwo ndinotenda kuti takakurumidza kuwana dhatabhesi kuchera. Mazhinji emidziyo panguva iyoyo akatipa huwandu hwehuwandu hwese pane rese dhatabhesi. Asi idzi huwandu huwandu hunogona kukutungamira zvisizvo.
Nemaonero ehuwandu hwevatengi vedu, taizoona kuti nhoroondo yevatengi vedu yaive yechikadzi, zera, mari uye vaigara mune imwe nharaunda. Kuti titengese kuchikamu icho, tinobvunza dzimba kune izvo chaizvo. Muenzaniso unogona kuve varume, vane makore makumi matatu kusvika makumi mashanu, vane mari yemumba inopfuura $ 30k. Taizosundidzira mushandirapamwe kune vateereri kuburikidza neakananga tsamba nevemhuri nepepanhau nenharaunda uye tingave nechokwadi chekuti torova munhu wese mumubvunzo iwoyo.
Sekuzivisa uye zvikamu zvekuparadzanisa zvikawedzera kusimba, takakwanisa kuchera zvakadzika. Panzvimbo pekutarisa kune iyo dhatabhesi rese, isu takangoerekana takwanisa kuunganidza dhatabhesi uye nekuona homwe dzevanhu dzaive tarisiro huru. Semuenzaniso, muenzaniso uri pamusoro ungangorega vanaMama vasina kuroorwa vane mari inopfuura $ 70k iyo yakanyanya-indexed seinogona kunge iri mutengi. Kunyange isu tese tine hunhu hwedu zvakafanana, chokwadi ndechekuti hapana vaviri vedu vakafanana.
Mukushambadzira kwepamhepo, iyo yepakati chimwe chikamu. Vamwe venyu mune tarisiro dzinoda kuongororwa ... vamwe vanoda kuverenga, vamwe vanoda kugovana mafoto, tarisa mavhidhiyo, uye vamwe vanongoda kubaya pane yakanaka dhisikaundi kana vachizviona. Iko hakuna mhinduro imwe chete inosvika kune ako ese tarisiro saka kusiyanisa zano rako pamasvikiro kunounza mhedzisiro. Uyezve kushambadzira kwakawanda-nzira pakati pemasvikiro ako kunoguma nemimwe mhedzisiro yakakura.
Pakati peimwe yeaya masvikiro, unogona kunge uchitaura kune chimwe chikamu - saka unofanirwa kuyedza uye kuyedza kupihwa kwakasiyana uye zvemukati. Iyo blog posvo inogona kuve yakanakisa kana ichidzidzisa uye ichipa ruzivo rwekuti vatengi vari kubudirira sei kushandisa chigadzirwa chako. Asi vhidhiyo yeYouTube inogona kushandiswa zvakanyanya nekusanganisira humbowo hwevatengi. Mureza kushambadza kunogona kuita zvirinani nekutapudza.
Ndokusaka kushambadzira kwepamhepo kwakaomarara. Kuchengetedza mhando inowirirana uye kutumira mameseji kune ese midhiya, uku uchisimbisa masimba enhau yega yega, uye kutaura zvakananga kune akasiyana manas inoda toni yebasa. Hazvina kukwana kuti uone chete kuona kwevatengi vako… iwe unofanirwa kunyura zvakadzika mune yega yega masvikiro uye woona kuti ndeupi rudzi rwevanhu wauri kusvika. Unogona kushamisika.
Tags: uwandu hwehuwandupakati nepakatinhoroondo yevatengikuchera dhatabhesikucheravanhunhamba
5 Vatengi vepamhepo Vanotonga Zororo
Unofanirwa Iwe Kushambadzira kune Akakosha mazwi Pasina Yekutsvaga Vhoriyamu?